Kalimpong : आजको GMCC सभाले लिएका निर्णयहरु यसप्रकारका हुने छन् - - वीर गोरखा
Home / kalimpong / Nepali News / slider / कालिम्पोंग / गोरखालैंड / नेपाली भाषा / Kalimpong : आजको GMCC सभाले लिएका निर्णयहरु यसप्रकारका हुने छन् -
Kalimpong : आजको GMCC सभाले लिएका निर्णयहरु यसप्रकारका हुने छन् -
दीपक राई Tuesday, July 18, 2017 kalimpong, Nepali News, slider, कालिम्पोंग, गोरखालैंड, नेपाली भाषा
कालेबुंग : आजको GMCC सभाले लिएका निर्णयहरु यसप्रकारका हुने छन् -
1. पहिलो अगस्त दिल्ली पुग्नेगरी गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीको एउटा उच्चस्तरीय टोली दिल्ली जाने। टोलीले दिल्लीमा क्याम्प हालेर सेमिनार, धरना गर्ने, एमपी, मन्त्रीहरू भेट्ने, बुद्धिजीवीहरूसँग सहयोग र सहकार्य गर्ने अनि अनशन बस्नेछ, जो दिल्लीमा बसेर नै आयोजन गरिनेछ।
2. शीघ्रै गोर्खाल्याण्डको ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने।
3. बन्द र हड़ताल यथावत राख्ने।
4. जीएमसीसीको एउटा टोली दुई-चारभित्रमा सिक्किम आउने अनि सिक्किमका मुख्यमन्त्री, राज्यपाल र सांसदहरूसँग भेट गर्ने। सम्भव भए सिक्किमका अन्य राजनैतिक पार्टीहरूसँग पनि भेट्ने।
5. कोलकातामा पश्चिम बंगालका राज्यपाललाई भेट गरी पहाड़मा भइरहेका अन्याय र खाद्यान्न नाकाबन्दीको उजुरी र बहालका लागि आग्रह गर्ने।
6. सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खा बुद्धिजीवीहरूको एउटा उच्चस्तरीय बौद्धिक तथा विशेषज्ञहरूको कमिटी बनाउने, जसले गोर्खाल्याण्डका लागि आवश्यक सबै सल्लाह, सुझाउ र सहयोग प्रदान गर्नेछ।
7. अहिलेसम्म विभिन्न विकास बोर्डहरूबाट राजीनामा दिने सबैलाई आभार प्रकट गरिएको छ। राजीनामा नदिएका बोर्डका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले शीघ्रै राजीनामा दिएर गोर्खाल्याण्डविरोधी वा जातिविरोधीको कलंकबाट आफूलाई बचाउन पुनः आग्रह गरिएको छ।
8. विधानसभामा पहाड़का विधायकहरूमाथि टीएमसी विधायक परेश पालले गरेको अभद्र व्यवहारको जीएमसीसीले कड़ा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
9. सिलगढ़ीमा पहाड़माथि लगाइएको खाद्यान्न नाकाबन्दी शीघ्र खोल्नका लागि माग गरिएको छ। यसको निम्ति आवश्यक सबै दबाउमूलक कार्यक्रमहरू गरिनेछ।
10. बैठकको शुरुआतमा सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई हृदयबाटै समर्थन र सहयोग गर्ने अभिभावक अनि नेपाली भाषा मान्यता संघर्षका पुरोधा नरबहादुर भण्डारीको निधनमा शोक प्रकट र श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। यसरी नै हिजो मिरिकमा पुलिसको गोलीले शहीद बनेका आशिष तामाङप्रति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ।
11.पश्चिम बंगाल सरकारबाट पुरस्कार प्राप्त गरेका सर्जकहरूलाई पुरस्कार फिर्ता गरेकोमा बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ अनि बाँकी रहेका सबै साहित्यकार, संगीतकार र सर्जकहरूलाई बंगाल सरकारबाट प्राप्त गरेका सबै पुरस्कार फिर्ता गर्न पुनः आग्रह गरिएको छ।
-बैठकमा सहभागी स्रोतले यी निर्णयहरू भएको जानकारी गराएको छ।